Iingcebiso zoPhuculo lweZithombe ukusuka kwi-Semalt Expert
Imifanekiso engenakulungiswa ingakhokelela kwimiphumo emibi ehambelana nokusebenza kwewebhusayithi. Kwiimeko ezininzi xa isivinini sakho sewebhu siphuthuma kakhulu, imifanekiso "engenakulungelelaniswa" ithwala inxalenye enkulu yecala. Ihlabathi lethu langoku libonakaliswe ngokuncintisana komphetho kumaphekula onke. Yingakho iiwebhsayithi ezicothayo zingenakukwazi ukuhlala kushushu.
Jason Adler, Semalt uMphathi weNtuthuko yabaThengi, uxwayisa ukuba ukuba umsebenzisi uvakashela indawo yakho kwaye uziva ukuba uthatha esinye sesibini ixesha elide kunokuba esetyenzisiweyo, kunokwenzeka ukuba baya kwiwebhusayithi yakho yomkhuphiswano xa ihamba ngokukhawuleza.
Unokuqiniseka njani ukuba imifanekiso yakho ayilutshisi indawo yakho?
Cinga ukusebenzisa ezi zihlongozo ezi-7 zokuphucula ukulungiselela ukuphucula i-SEO:
1 - lounge кафе лес ярославль. Sebenzisa iifoto ezisemgangathweni ezisemgangathweni
Le nyaniso eyinqobo esebenzayo kuzo zonke iintlobo zewebhu. Ufuna imifanekiso ekhethekileyo neyayimvelaphi kwisiza sakho ukuba unenjongo yokubonelela ngamava angcono kumsebenzisi. Ukuba unako ukuthatha iifoto kunye nekhamera yekhwalithi efanelekileyo okanye ufumane abayili bemifanekiso abangakwazi ukudala iifoto zangaphambili, bhetele kulunge ukuba indawo yakho iya kubaluleka.
Isilingo sokusebenzisa iifoto zezitokethi sinokuphakanyiswa ngokucacileyo. Nangona kunjalo, awufuni ukuba nesithombe esinezigidi zamanye amasayithi.
2. Ukuphucula imifanekiso yakho ngezixhobo
Abasebenzisi bathanda imifanekiso engabonakaliyo kuphela kodwa iphindwe ngabanye. Izixhobo zokuhlela isithombe zixhaphake kakhulu kwi-intanethi. Unako ukufumana isixhobo esifanelekileyo ukufaka into kwimifanekiso yakho ngaphambi kokuba ubathumele kwi-intanethi.
Ingaba ufuna ukufaka umbhalo, uyingqayizivele, ubuntu okanye uncedo lokuphucula isibheno sakhe, kukho isixhobo saloo nto. Sebenzisa izixhobo zokuhlela izithombe ukudala imifanekiso evelele kwaye unikezele indawo yakho.
3. Igama elichazayo kunye negama eliphambili leefayile
I-SEO iindlela ezilungileyo zigxininisa ukubaluleka kokufaka amagama angundoqo kumagama wefayile echaza umfanekiso. Igama le fayile lizisa Ii-injini zokukhangela malunga nomfanekiso nento ekhoyo.Ukukhuphela imifanekiso, faka igama elikhethiweyo ngento echaza umfanekiso ngokusemgangathweni. 4. Nciphise ubungakanani bemifanekiso yakho
Unokunciphisa ubungakanani befayile ngaphandle kokunciphisa umgangatho womfanekiso. Ngokuguqula nokucwangcisa imifanekiso, unokuphucula ngokukhawuleza isantya sesayithi.
Sebenzisa i- "Gcina kwiWebhu" ye-Adobe Photoshop ukuqinisekisa ukuba imifanekiso ephela kwiwebhsayithi yakho ifana kakhulu.
5. Sebenzisa ifomathi yefayile eyiyo
Kukho iindlela ezintathu eziqhelekileyo zefomathi: JPEG, PNG, kunye ne-GIF.
I-JPEG ifomathi ethandwa kakhulu kuba igcina ubuncinane bezithombe. I-GIF isetyenziswa kakhulu kwiimifanekiso kunye nobugcisa obulula. Ixhasa imvelaphi engabonakaliyo kwaye ke iphelele kwiimpawu zeenkampani kunye nezinye izinto zewebhu. I-PNG yindlela ekhoyo namhlanje ukuya kwi-JPEG ne-GIF. Le fomathi isekela ukukhanya, ikulungele ukulungiswa kwe-gamma, kunye nebala lemibala engcono.
6. Nokwandisa isicatshulwa somfanekiso we-alt kunye nesihloko
Umbhalo wesicatshulwa kunye nesihloko somfanekiso kufuneka senziwe ngokufanelekileyo ukunceda iwebhusayithi yakho ifumaneke ngcono kwi-SERP kwaye ibuyise amava omsebenzisi.
Umbhalo wecala mhlawumbi yindlela efanelekileyo yokuqinisekisa ukuba iimveliso zakho zivela kwiwebhu ye-Google kunye nokukhangela umfanekiso.
7. Yenza iipempile zezakhiwo kwiziko lakho
Ukuphucula imifanekiso ye-SEO ngokuqinisekileyo kufanele umzamo. Isiza sakho sithwala ngokukhawuleza kwaye iindwendwe zifumana oko zifuna ngokukhawuleza. Amawebhusayithi aphantsi alahlekelwa ukubonakala, ukuhla kwezinga lokuguqula kwaye ngoko kuthengiswa kunye neengeniso. Izi ngcebiso zingentla ziyakunceda ukuba ugweme ezi lahleko.